Moments leh saaxiibo 4
Kulan kooxeed fiidadkii hore su'aasha la weydiiyay: Miyuu yahay makhraafiyiinta dufan iyo cunto yaryar?
Fiisoofiiste wuxuu noqon karaa cunista hilib ama qudaar, laakiin khudradda iyo cunista hilibka kama dhigeyso mid cilminafsiyeed. Nasiib darrose, dad badani waxay moodayeen in sine qua aanta noloshu ruuxiga aheyn ay tahay khudradda, halka bayaanka noocaani yahay mid ka soo horjeedda barashada macallimiinta macallimiinta runta ah. Ciise wuxuu yidhi, Ma aha waxa afka gala waxa ninka nijaaseeya, laakiin waxa afka ka soo baxa, kaas ayaa ninka nijaaseeya, ayuu yidhi. (Mat.xvii.)
Ha rumeysanina inaad dhex fadhiisatid duurka gudcurka, iyo is-hoosaysiinta iyo dadka ka fog, ha u rumeysan nolosha in xididdada iyo dhirta. . . “Addoomayow, taasina waxay kuu horseedi doontaa himilada xoreynta ugu dambeysa," ayaa yiri Codka Siyeeliska Theosophist waa inuu adeegsadaa xukunkiisa ugu wanaagsan oo markasta lagu xukumaa si caqli gal ah maskaxdiisa jir ahaaneed iyo caafimaad maskaxeed. Marka laga hadlayo cunnada su'aasha ugu horeysa ee uu isweydiin doono waa "Cunno noocee ah oo aan ugu baahanahay in jirkeygu caafimaadka ku hayo?" Markuu taas tan ku helo tijaabo ka dib ha u ogolaado inuu qaato cunnadaas qibradiisa iyo indhihiisa ay muujinayaan si ugu habboon loogu habeeyo shuruudaha jirkiisa iyo maskaxdiisa. Markaas shaki kuma jiro waxa uu cuni doono, laakiin runtii isagu ma hadli doono ama uma malayn doono inuu hilibku cuno ama khudradda inuu yahay u qalmidda theosophist-ka.
Sidee ayuu ufududaha dhabta ah u tixgelin karaa naftiisa, oo wuxuu weli cunaa hilibka markaan ogaanno in rabitaanka xayawaanka laga soocayo hilibka xayawaanka si uu jidhka cuna u cuno?
Theosophist-ka dhabta ahi waligii sheegan maayo inuu yahay theosophist-ka. Waxa jira xubno badan oo ka tirsan Bulshada Theosophical-ka laakiin aad u tiro yar theosophist-ka dhabta ah; maxaa yeelay theosophist-ga, waa sida magaca ay tilmaamayso, mid ku gaadhay xigmad rabaani ah; mid ku midoobeen Ilaahiisa. Markaan ka hadlayno theosophist dhab ah, waa inaan u jeednaa mid leh xigmad rabaani ah. Guud ahaan, in kasta oo aan si sax ah loo hadlin, hadana, si kastaba ha ahaatee, theosophist wuxuu xubin ka yahay Ururka Theosophical Society. Qofka dhahaya wuu ogyahay damacyada xayawaanku in loo wareejiyo jirka qofkii cuna wuxuu ku cadeeyaa bayaankiisa inuusan ogayn. Hilibka xayawaanku waa habka ugu horumarsan uguna urursan nolosha taas oo caadiyan loo isticmaali karo cuntada. Tani waxay ka dhigan tahay rabitaan, xaqiiqdii, laakiin rabitaanka xayawaanku xaaladdiisa dabiiciga ahi aad ayuu uga yaryahay rabitaanka aadanaha. Rabitaanka lafteedu ma xuma, laakiin wuxuu xumaadaa oo keliya marka maanku qalloocan yahay mideeyo. Maaha damaca laftiisa ee xun, laakiin ujeedooyinka sharka leh ee ay maankiisa ku ridi karto oo ay maskaxda ku kicin karto, laakiin in la sheego rabitaanka xayawaanku inuu yahay xubin loo wareejiyay jidhka bini aadamka waa bayaan aan sax ahayn. Jirka loo yaqaan kama rupa, ama jidhka-jidhka, ee sameeya jidhka xayawaanka, sinaba ugama xirna hilibka xayawaanka markuu dhinto. Rabitaanka xayawaanku wuxuu ku nool yahay dhiigga xayawaanku. Markii xayawaan la dilo, jirku damacoodu wuxuu ka baxaa jidhkiisa jirku wuxuu la tagaa dhiigga nolosha, hilibka ayuu ka tagayaa, wuxuu ka kooban yahay unugyada, sida nolosha xoogga badan ee xayawaankaas ay ka shaqeysay boqortooyadii khudradda. Cunista hilibka wuxuu lahaan karaa xaquuq aad u badan oo uu ku dhihi karo, waana macquul in badan haddii uu dhaho, in khudradda uu naftiisa ku sumoobo maadada 'prussic acid' isagoo cunaya saladh ama wax kasta oo sun ah oo ku badan khudaarta. si sax ah u sheeg in kii cunay hilibku cunay oo nuugay damacii xayawaanka.
Ma runbaa in khatarta Hindiya, iyo ragga rabbaaniga ah, ay ku nool yihiin khudradda, hadday sidaas tahay, ma aha in kuwa naftooda koraan ay ka fogaadaan hilibka iyo sidoo kale ku noolaadaan khudaarta?
Waa run, in intooda badan yogis ma cunaan hilibka, ama kuwa leh helitaan qaali ah oo xagga ruuxa ah, oo sida caadiga ah ku nool ragga mooyee, laakiin taasi kuma raaceyso sababta oo ah waxay sameeyeen, dadka kale oo dhami waa inay ka fogaadaan hilibka. Nimankani ma haystaan ​​gaaritaan xagga diinta ah maxaa yeelay waxay ku noolyihiin qudaar, laakiin waxay cunaan khudradda maxaa yeelay waxay sameyn karaan awood la'aan xagga hilibka. Mar labaad waa inaan xasuusnaano in kuwa helay ay aad uga duwan yihiin kuwa isku dayaya inay bilaabaan inay helaan, oo cunnada midna ma noqon karto cunugga kan kale maxaa yeelay jir kasta wuxuu u baahan yahay cuntada ugu muhiimsan ee ay ku ilaaliso caafimaadka. Waa wax lagu farxo maxaa yeelay waa wax lagu qoslo in la arko in daqiiqada ugu fiican la arko qofkii arkaa waxay u egtahay inuu u maleynayo inay tahay halka uu gaari karo. Waxaan nahay sida carruurta oo arkaya shay fog laakiin si aan ula kac ahayn u gaaran inay qabtaan, oo aan ka fikirin masaafada u dhexeysa. Waa wax aad u xun in kuwa damac u noqon kara yogiship ama ilaahnimadu inaysan ku dayin astaamaha rabbaaniga ah iyo fahamka ruuxiga ah ee ragga rabbaaniga ah halkii ay ka yeeli lahaayeen caadooyinka ugu badan ee jirka iyo waxyaalaha iyo caadooyinka, iyo iyagoo u maleynaya inay sidaas sameeyaan, inay iyaguna noqon doonaan kuwo rabaani ah . Mid ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka u ah horumarka ruuxiga ah ayaa ah in la barto waxa Carlyle ugu yeerayo “Jimicsiga weligiis ah ee Waxyaabaha.”
Maxaa saameynaya cunidda khudradda ku jirta jidhka dadka, marka la barbardhigo cunista hilibka?
Tan waxaa inta badan lagu go'aamiyaa qalabka dheef-shiidka. Dheef-shiidka waxaa lagu qaadaa afka, caloosha iyo xiidmaha, waxaa caawiya dheecaanka ku dhaca beerka iyo xameetida. Khudaarta ayaa inta ugu dheefshiidka ku jirta xiidmaha xiidmaha, halka caloosha guud ahaan ay tahay unug dheefshiidka. Cuntada afka loo galiyo waxaa ku jira dhanaan oo lagu qasay candhuufta, ilkaha tilmaamaya dabeecadda dabiiciga ah iyo tayada jirka in ay ahaato dhir ama bakhshiil. Ilkaha waxay muujinayaan in ninku yahay saddex-meelood labo laba nooc iyo saddexbilood oo duug ah, taas oo macnaheedu yahay in dabeecadu ay siisay laba-meelood laba tirada ilkaheeda tirada cunista hilibka iyo saddex-meelood meel khudaarta. Jirka dabiiciga ah ee caafimaad qabta tani waa inay ahaato saamiga cuntadiisa. Xaalad caafimaad leh in hal nooc loo adeegsado ka saarida kan kale waxay sababi doontaa isku dheelitir la'aan caafimaad. Khudaarta u gaarka ah waxay sababtaa halsano iyo wax soo saarka jirka khamiirka, kuwaas oo keena nooc kasta oo cuduro ah oo uu bini'aadamka dhaxlo. Sida ugu dhakhsaha badan halsano u bilaabmo caloosha iyo mindhicirka markaa waxaa ku jira qaab khamiir leh dhiiga isla markaana maskaxduna xasilloon tahay. Gaaska kaarboon-gaaska ah ee la soo saaray wuxuu saameeyaa wadnaha, oo wuxuu u dhaqmaa dareemayaasha si ay u sababaan weerarro curyaannimo ama xanuunnada kale ee neerfaha iyo murqaha. Waxaa ka mid ah astaamaha iyo astaamaha ubax-cagaarka waxaa ka mid ah xanaaq, caloosha, isku-buuqa dareemayaasha, wareegga oo xumaada, wadnaha oo xumaada, joogsashada fikirka iyo feejignaanta maskaxda, burburka caafimaadka adag, is-xakameynta jirka, iyo u janjeera xagga dhexdhexaadnimo. Cunista hilibka waxay jirka siisaa xoogga dabiiciga ah ee ay u baahan tahay. Waxay ka dhigeysaa jirka mid xoog leh, caafimaad leh, xayawaan jireed, waxayna dhistaa xayawaankaan xayawaanka ah qalcad ka dambeysa taas oo maskaxdu u adkeysan karto dhibaatooyinka kale ee shakhsiyadeed ee jir ahaaneed ee ay la kulanto waana inay la tartantaa magaalo kasta oo weyn ama isu soo ururinta dadka. .